Iqembu lamasiko elenza izimanga KwaZulu-Natal – The Ulwazi Programme
Iqembu lamasiko elenza izimanga KwaZulu-Natal
Amalungu oMlilo Multi-Talented Youth Group
Umlilo Multi-Talented Youth Group yinhlangano yezobuciko enamalungu angu-34 edabuka endaweni yaseMkhomazi, eNingizimu yeTheku. Leli qembu eselike lamenywa ukuba likhombise amakhono amalungu alo ezindaweni eziqavile njengasoKhozini naseLangeni Hotel liyisibonelo esihle emphakathini.
Yize leli qembu seliqala ukumenywa ukuba liyonandisa ngaphandle kwesifundazwe saKwaZulu-Natal futhi selike laphefoma enkundleni eyodwa nembongi edumile uDkt. uGcina Mhlophe, aliyidelile injongo yalo yokuzakhela igama eThekwini. Ngokusebenza kwalo kokuzikhandla, libala izindawo ezinjenge-International Convention Centre yaseThekwini (Durban ICC), i-Playhouse Theatre neSibaya Casino and Entertainment Kingdom njengezinye zezindawo ezidumile zaseThekwini lapho selike lanandisa khona.
Umlilo Multi-Talented Youth Group uzigqatsha ngokuquketha osomkhono abanamakhono ahlukahlukene emkhakheni wezobuciko. Kosomakhono baleqembu, kubalwa izimbongi, abadansi, abaculi, ababhali kanye nabalingisi. Ilungu elincane kunawo wonke kuleli qembu lineminyaka eyishumi nje vo, kanti elidala kunawo wonke lineminyaka engamashumi amathathu ubudala.
Ngenkathi uZandile Buthelezi (27) esungula Umlilo, wayeyintombazane nje eyayineminyaka engu-21, ezama into angazigcina ematasa ngayo kwazise phela ukuthi wayesenonyaka aphothula izifundo zakhe zikamatikuletsheni kodwa engasebenzi futhi engenayo imali yokufunda enyuvesi, ezihlalele nje ekhaya.
“Ngenkathi ngisungula Umlilo, ngabona ukuthi babebaningi abantu abasha ababenjengami: ababezihlalele nje emakhaya, bengafundi futhi bengasebenzi. Ngazama ukubahlanganisa ngoba inhloso yami kwakuwukusebenza nabantu ababeneminyaka engu-15 kuya phezulu. Ngeshwa-ke iningi labo, bayishaya indiva lento engangiyiveza kubona. Ngabe sengiyaphoqeleka-ke ukusebenzisana nezingane ezincanyana, iminyaka yazo eziningi yayibalelwa eshumini nje kuphela. Kodwa kwathi ngo-2010, iqembu laqala ukwenza ezibukwayo emphakathini, abadadlana baqala-ke ukukhombisa intshisekelo yokuba ngamalungu eqembu,” kusho uZandile.
Leli qembu libhalisiwe ngokusemthethweni njengenhlangano engahlose kwenza nzuzo. Umsebenzi walo uphethwe ikomidi elikhethwe ngokusemthethweni. Le komidi yilo futhi elinakekela ukuphathwa kahle kwezimali zeqembu.
Amalungu aleqembu achitha isikhathi esiningi efundisana ngemikhakha ehlukahlukene yezobuciko. Ukuze ube yilungu laleliqembu kumele ukhokhe imali engu-R10 ekugunyaza ukuba ube yilungu le qembu ngonyaka kodwa awuvele nje uvunyelwe ukuba ujoyine leliqembu. Kumele uchaze ukuthi yini ndaba ufisa ukuzibandakanya naleli qembu futhi uvume ukuthi uzoyilandela yonke imithetho nemigomo yeqembu.
“Ngenxa yomsebenzi esiwenzayo, kubalulekile ukuthi amalungu ethu akwazi ukuziphatha kahle. Amalungu ethu siwafundisa ukuziphatha ukuze abe yizibonelo ezinhle emphakathini,” kusho uZandile.
Zonke izimali ezenziwa egameni le nhlangano zitshalwa enhlanganweni ukuze kuqhubeke umsebenzi weqembu, kodwa-ke amalungu akanqatsheliwe ukwenza umsebenzi eceleni.
Amanye amalungu oMlilo nomlingisi oqavile uBheki Mkhwane
“Ave ngithokoza uma sengibona amalungu ethu, ikakhulukazi lawa amancanyana eselekelela emakhaya ngokubeka imali yesinkwa etafuleni. Okunye okungijabulisa kakhulu ukubona indlela lezi zingane esisebenza ngazo zijabula uma siphuma siyonandisa emakudeni, ngoba zithola ithuba lokubona izindawo ezintsha,” kusho uZandile.
UZandile uthi yize zingeningi izingqinamba iqembu elibhekana nazo kodwa zikhona zona. “Kuke kusikhubaze uma abanye abazali sebesola iqembu uma izingane zabo seziqala ukungenzi kahle emakhaya. Sike saba nenkinga futhi lapho bekukhona khona amalungu eqembu ebengayithobeli imithetho yeqembu. Abanye abantu futhi bake basimeme befuna siyobanandisela mahhala kanti ziningi izindleko ukumele nathi sizikhokhele uma siyonandisa. Kodwa-ke asiphelile amandla, siyazi ukuthi umkhumbi oya empumelelweni uhlaselwa izivunguvungu.”
Leli qembu lifisa ukwenza imali eyanele ukuze lithenge imifaniswano yeqembu ngokuphelele kusuka phansi kuya phezulu, kuzona zonke izigaba zeqembu. Liphinde lifise ukuheha abantu abaningi abasha ukuze likhule kanye negama lalo.
Kodwa ezifisweni zalo ezinkulu kubalwa ukwakha amanye amagatsha alo iqembu njengoba seliqalile eMurchison ePort Shepstone, ukuwela ulwandle liyonandisa nokubona amalungu alo ephumelela empilweni eba yizibani ezikhanyela wonke umphakathi.
Categories News Tags abantu abasha, iqembu, ubuciko, Umlilo Multi-Talented Youth Group
2 thoughts on “Iqembu lamasiko elenza izimanga KwaZulu-Natal”
06/03/2017 at 10:07 am
wow well done to Umlilo. these kids are so powerful and versatile . I have seen them in so many events entertaining. keep up the good work guys. keep you fire burning
09/03/2017 at 10:47 pm
Thank you for your comment and please keep supporting this great initiative, Zee!